Xubin Al-Shabaab ah oo cambaareeyey hoggaanka kooxda - Sabahionline.com
Xubin Al-Shabaab ah oo cambaareeyey hoggaanka kooxda Abriil 01, 2012
Xasan Daahir Aweys oo ka tirsan kooxda al-Shabaab ayaa dagaalyahaniinta ku cambaareeyey dilka aan micnaha lahayn ee ay shacabka kula kacayaan iyo xulufaysigooda al-Qaacida, SONNA ayaa Axaddii (1-da April) werisay. Qodobbo la xiriira
Al-Shabaab oo aan lagu martiqaadin shirka London
Aweys oo hoggaamiye hore ugu ahaa koxdii Xagjirka ahayd ee Islaamiyiinta Xisbul Islaam ayaa kox ku dhaw oo asxaabtiisa ah oo jooga Ceelasha Biyaha Sabtidii u sheegay in xulufaysiga al-Qaacida aanan la aqbali karayn, sidoo kalena wuxuu kooxda ku eedeeyey in ay sabab la’aan u qubayaan dhiig aan waxba galabsan. Wuxuu sheegay in dadka degaanka ihi ay al-Shabab ka baqayaan collaaddaada arxan-darrada ah awgeed, taana ay minjo xaabisay himiladii kooxda, isagoo intaa ku daray in ay ahayd in ay koxdu qaadato tallaabooyin taxaddar ah oo ay uga ilaalinayso in dagaalladooda ay rayidku ku waxyeelloobaan. Bishan, ayaa hoggaamiye al-Shabaab ka mid ahaa oo la yiraahdo Cumar Xammaami loona yaqaan Abuu Mansuur al-Amriiki, uu muujiyay sida uu uga biyo diidsan yahay kooxda asagoo farriin muuqaal ah internetka soo gashay faahfaahiyeyna in uuba naftiisa u baqayo. Muxuu kula yahay qoraalkan?